IL ayuu beelay isagoo dagaalka sariirta ku jira, ka dibna baaritaan la sameeyey ayaa lagu ogaaday inay sababtaani ka dambeysay! | Filimside.net
Home » Arimaha Bulshada » IL ayuu beelay isagoo dagaalka sariirta ku jira, ka dibna baaritaan la sameeyey ayaa lagu ogaaday inay sababtaani ka dambeysay!
IL ayuu beelay isagoo dagaalka sariirta ku jira, ka dibna baaritaan la sameeyey ayaa lagu ogaaday inay sababtaani ka dambeysay!
Nin u dhashay Ingiriiska ayaa mid ka mid ah labadiisa indhood uu nuurku ka tegay isagoo dagaalka sariirta ku jira.
29 sanno jirkaan ayaa la xaqiijiyey inay ishiisu aragtida lumisay ka dib markii uu si awood ah oo ku celcelis ah habeenkaas galmo ugu riyaaqay.
Laakiin saameyn xun ayey ku reebtay oo nuurka ishiisa ayuu ku waayey, subaxdiina wuxuu horay ka aaday isbitaalka – nasiib wanaag ayeyse u aheyd in loo sheegay in 24 saac gudahood lagu dabiibi doono, ka dibna uu awood u yeelan doono inuu labadiisa indhood wax ku wada arko.
Si kastaba ha ahaatee, baaritaan lagu sameeyey ninkaan ayaa waxaa lagu ogaaday sababtii ka dambeysay inay ishiisu nuurka lumiso intii uu galmada ku jiray. Waxaana loo sheegay inay cilladaani tahay mid ku dhacda ragga dumarka ka sarre mara xilliga sariirta, balse waa haddii ay calaamadahaani israacaan.
Joornaalka arrimaha caafimaadka ee British Medical Journal ayaa waxaa lagu qoray in nin walba uu lumin karo aragtida mid ka mid ah labadiisa indhood haddii uu si xowli ah u shaqeeyo inta lagu jiro dagaalka sariirta.
Dhakhaatiirta ayaa waxay daaha ka qaadeen in ragga qaabka awooddu ku dheehan tahay jagta u boobsiiya, ay halis ugu jiraan in mid ka mid ah indhahooda uu dhiig xiro… Sidoo kale tani waxay ku dhici kartaa ragga neefta isku celiya xilligaas, isla markaana awood ahaan murqahooda taaga.
Taasi waxay keeneysaa inuu cadaadis fuulo indhihiisa, ka dibna uu dhiig xiro, taasoo natiijo ahaan keeneysa in nuurka uu lumiyo. Baaritaankaan ayaa sidoo kale daaha looga qaaday in inta badan ragga neefsada inta lagu jiro dagaalka sariirta ay ka badbaadaan cudurkaan.
Waxaa Aqrisay 2,718